Manchester City, Liverpool Iyo Chelsea Oo Rikoodh Cusub U Dhigay Horyaalka Premier League | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Manchester City, Liverpool Iyo Chelsea Oo Rikoodh Cusub U Dhigay Horyaalka Premier League
(30-10-2018) Kooxaha Manchester City, Liverpool iyo Chelsea ayaa rikoodh cusub ka dhigay horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League xili ciyaareedkan, halkaas oo ay ka diiwaangashadeen taariikh gaar ah oo kooxaha kale ku hammiyi doonaan inay jabiyaan.
Manchester City oo xalay 1-0 kaga adkaatay Tottenham ayaa hoggaaminta tartanka kusoo laabatay, waxaanay dhibco ahaan la sinmeen Liverpool oo 4-1 soo khaarajisay Cardiff City balse ka hoosaysa dhinaca goolasha. Kaalinta saddexaad waxa soo fadhiisatay Chelsea oo Axaddii 4-0 ku jiidhay Burnley oo ay marti u ahayd.
Manchester City oo difaacanaysa horyaalka oo xili ciyaareedkii hore ay ku qaadday dhibco badan, ayaa waxay dagaal la gelaysaa naadiyada waaweyn iyo yaryar ba ka hor inta aanay u dhaqaaqin inay iska reebo Liverpool oo aan beryahan arag wax koob ah hase yeeshee xili ciyaareedkan u muuqata inay tartami karayso.
Chelsea oo laba dhibcood oo kaliya ka dambaysa City iyo Liverpool oo haysta min 26 dhibcood, ayaa waxay xili ciyaareedkii tegay difaacan kari weyday horyaalka Premier League oo sannadkii ka horreeyey ee 2016-17 uu u qaaday Antonio Conte, waxase tababaraha cusub ee Sarri uu u nidaamiyey qaab cusub oo awood badan oo ay horyaalka ku dhacsan karaan ay ka muuqato.
Saddexdan kooxood ayaa waxay kulamadoodii toddobaadkan ee horyaalku ahaayeen kuwoodii 10-aad ee aan hal marna laga badinin, waxaanay ku galeen buugga taariikhda horyaalka dalkaas oo ay noqdeen markii koowaad ee saddex kooxood aan tobanka kulan ee ugu horreeya hal marna laga badinin.
Si kastaba ha ahaatee, saddexdan kooxood ayaa la eegi doonaa sida ay usii wadaan guul-darro la’aanta iyo inay kaalmaha hore loollanka ugu sii jiraan.